Casharkan ku saabsan lambarada Jarmalka, waxaan ku tusi doonaa lambarada Jarmalka laga bilaabo 1 ilaa 100. Sii wadida casharkeena, waxaan arki doonaa lambarada Jarmalka 100 ka dib, waxaan sii socon doonaa wax yar oo aan baran doono nambarada Jarmalka ilaa 1000. Nambarada Jarmalka Asalkii la odhan ah Zahlen waxaa lagu muujiyaa sida.
Muxaadarada nambarada Jarmalku inta badan waxa ay ka mid tahay maadooyinka ugu horeeya ee ay bartaan ardada bilaaba barasha jarmalka, wadankeena waxa lagu dhigaa fasalada 9-aad ee casharada jarmalka, nambarada jarmalka ee horumarsan waxa lagu dhigaa fasalada 10aad.
Waxaan marka hore arki doonaa ilaa 100 lambar oo Jarmal ah, ka dib waxaan arki doonaa tirooyinka ilaa kun ee Jarmalka, ka dib waxaan u adeegsan doonaa macluumaadkan aan baranay tallaabo-tallaabo malaayiin iyo xitaa malaayiin. Waxaan baran doonaa tirooyinka Jarmalka ilaa balaayiin. Waa muhiim inaad barato Jarmalka lambarada, sababtoo ah tirooyinka ayaa inta badan loo isticmaalaa nolol maalmeedka. Markaad baranayso lambarada Jarmalka, waa inaadan barbar dhigin lambarrada Turkiga ama nambarada Ingiriisiga. Isbarbardhigga ama isbarbardhigga habkan ayaa laga yaabaa inuu keeno waxbarasho khaldan.
nolosha Daily walba iyo meel walba lambarada Jarmal waxaa loo isticmaali doonaa inay ka hortagaan arrimaha ay tahay in la si fiican u bartay, sida ay tahay in si fiican tirada xasuusta ay tahay in la sameeyay iyo lambarada Jarmal xafiday si qurux badan u sameeyey waxyaalo faro badan mar kale.
Saaxiibbada qaaliga ahow, Jarmal guud ahaan waa luuqad salka ku haysa hadal ahaan, waxaa jira waxyaabo badan oo reeban oo ka reebitaanadan waxay u baahan yihiin in si fiican loo xafido.
Lambarada Jarmalka Way fududahay in la barto, dhib badan kuma lahan, ka dib barashada caqligeeda, waxaad si fudud u qori kartaa lambarro Jarmal ah 2-god, 3-digit ah, 4-god ah iyo tiro ka badan ah ah ah Jarmal ah.
Hadda aan marka hore aragno lambarrada Jarmalka oo sawirro leh, ka dibna aan baranno lambarrada Jarmalka hal ilaa boqol.
Nambarada Jarmalka Ilaa 10 ( Sawir leh)
LAMBARKA JARMALKA 0 MAYA
LAMBARKA JARMALKA 1 EINS
LAMBARKA JARMALKA 2 ZWEI
LAMBARKA JARMALKA 3 DREI
LAMBARKA JARMALKA 4 VIER
LAMBARKA JARMALKA 5 FUNF
LAMBARKA JARMALKA 6 SECHS
LAMBARKA JARMALKA 7 SIEBEN
LAMBARKA JARMALKA 8 ACHT
LAMBARKA JARMALKA 9 NEUN
Lambarrada ka soo jeeda Jarmalka 1den ilaa 100e
Saaxiibbada qaaliga ah, erayga Zahlen macnihiisu waa lambarro af Jarmal ah. Lambarada tirinta, lambarrada aan hadda baran doonno, waxaa loo yaqaan Kardinalzahlen. Nambarada caadiga ah sida tan koowaad, labaad, iyo tan saddexaad waxaa Jarmal loogu yeeraa Ordinalzahlen.
Hadda aan bilowno barashada nambarada tirinta jarmalka ee aan ugu yeerno Cardinal.
Lambaradu waa arrin muhiim u ah Jarmalka, sida luqad kasta. Waxay u baahan tahay in si taxaddar leh loo barto loona xafido. Si kastaba ha noqotee, ka dib barashada, waxaa lagama maarmaan ah in la xoojiyo macluumaadka la bartay iyada oo la adeegsanayo ku celcelin badan iyo ku celcelin. Leylisyada badan ee ku saabsan mowduucan, sida ugu dhakhsaha badan uguna saxsan tirada loo baahan yahay ayaa loo tarjumi doonaa af Jarmal.
Ka dib markaad ogaatid lambarrada u dhexeeya 0-100 ee aan arki doonno meesha ugu horreysa, waxaad si fudud u baran kartaa lambarada wejiga ka dib. Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan inaad si taxaddar leh u baarto oo aad u xafido waxyaabahaas. Bartayada, mawduuca lambarrada af Jarmal sidoo kale waxaa lagu heli karaa qaab mp3 ah. Haddii aad rabto, waxaad sidoo kale baari kartaa goobta oo aad ka heli kartaa casharradeena casharka ah ee Jarmalka oo qaab mp3 ah.
Ugu horreyntii, waxaan ku siinaynaa sawir nambarro Jarmal ah oo aan kuu diyaargareynay, ka dibna aynu ku bilaabanno nambarkeena Jarmalka:
Hadda waxaad arki kartaa in ka badan labaatan jadwal Jarmal ah oo ku jira foomka qaabka:
1 Xubno 11 elf
MUUQAALKA JARMALKA (IMAGE)
Hadda waxaan ku aragnaa lambaradaas liiska iyaga oo akhrinaya shakhsiyaadka gaarka ah:
7: sieben (zi: kun)
Ogow in tirooyinka kor ku xusan, farqiga u dhexeeya lambarada 16 iyo 17 waa in xarfaha la tuuro (isbarbardhig 6 iyo 7).
Waxaad arki doontaa sieben => sieb iyo sechs => sech)
Lambarrada ka dib markii labaatanaad ah ayaa la helayaa iyagoo ku dhejinaya ereyga "und" macnaheedu "iyo" u dhexeeya mid iyo kan kale.
Laakiin halkan, si ka duwan Turkiga, waxay ku qoran yihiin talaabo ka hor laakiin tallaabo ka hor.
Intaas waxaa sii dheer, hal shay oo ay tahay inaad halkan fiiro gaar ah u yeelatid ayaa ah ereyga eins, oo loola jeedo lambarka 1 (mid), waxaa loo adeegsadaa ein markii la qorayo lambarro kale. tusaale ahaan 1 hadaan qoreyno Xubno laakiin tusaale ahaan 21 Haddaynu qoreyno markaa kow iyo labaatan BIRee Ein Waxaan u qornaa sida.
Haddii aad si fiican u eegto sawirka hoose, waxaad si fudud u fahmi kartaa sida tirada jajab tobanle loo qoray Jarmal.
Nambarada Akhriska oo Jarmal ah
Sida aad ku arki kartid sawirka kore, waxay ku qoran yihiin talaabada ka hor, laakiin ka hor talaabada.
Hadda, laga bilaabo 20 ilaa 40, waxaad arki kartaa lambarada miiska jarmalka:
GARGAARKA KHASAARAHA (20-40)
Hadda aynu ku qor liiska tirada akhriska ah ee u dhaxeeya 20 40 Jarmalka:
21: ein und zwanzig (si und svansig) (hal iyo labaatan = = labaatan)
22: Zwei und zwanzig (svay und svansig) (laba iyo labaatan = labaatan labaatan)
23: Drei und zwanzig (dray und svansig) (saddex iyo labaatan = labaatan iyo labaatan)
24: vier und zwanzig (fi: ir und zwanzig) (afar iyo labaatan = labaatan iyo afar)
25: Fünf und zwanzig (fünf und svansig) (shan iyo labaatan = shan iyo labaatan)
26: Sechs und zwanzig (zeks und svansig) (lix iyo labaatan = = labaatan iyo lix)
27: Sieben und zwanzig (zi: bin und svansig) (toddoba iyo labaatan = = labaatan toddoba)
28: Acht und zwanzig (aht und svansig) (siddeed iyo labaatan = = labaatan iyo siddeed)
29: neun und zwanzig (noyn und svansig) (sagaal iyo labaatan = = labaatan iyo sagaal)
30: Dreißig (maalmo)
31: einunddreißig (may und undays)
32: jweiunddreißig (svay und draysig)
Labaatan ka dib Lambarada Jarmalkau dhexeeya kuwa iyo tobnaadka "ve"Macnaheedu"iyoWaxaa lagu helaa iyadoo la dhigo ereyga ". Si kastaba ha noqotee, halkan af Turki, cutubyada lambar ayaa marka hore la qoraa, looma qoro tobanka lambar, sida aan qoreyno.. Si kale haddii loo dhigo, tirada ku jirta hal lambar ayaa marka hore la sheegaa, ka dibna tirada tobanka lambar ayaa la sheegaa.
Sida aad halkan ku aragtaan, waxaan marka hore ku qoreynaa lambarka meesha ay ku yaalliin, waxaan ku darnaa erayga "und" waxaan ku qoreynaa tobanka lambar. Xeerkani wuxuu khuseeyaa dhammaan nambarada illaa boqol (30-40-50-60-70-80-90 sidoo kale), marka kuwa lambarada ayaa marka hore la sheegaa, ka dibna tobanka lambar.
Dhanka kale, waxaan u qornay lambarada Jarmalka si gooni gooni ah (tusaale. Neun und zwanzig) si aan uga dhigno mid cad oo fahan badan, laakiin dhab ahaantii tirooyinkan ayaa si wada jir ah loo wada qoray. (tusaale: neunundzwanzig).
Ma taqaanaa sida loo tiriyo toban toban, sax? Waa qurux badan tahay. Hadda waxaan tan ku sameyn doonnaa af Jarmal. Aynu ku tirino tirooyinka Jarmalka toban iyo toban.
LAMBARADA LAGA HUBAY GERMAN
Ku tax tir tir tirooyinka jarmalka leh akhrintooda:
Sidoo kale xusuusnow farqiga ujeedka hannaanka 30,60 iyo 70 ee kor ku xusan. Lambarradan ayaa si joogto ah u qoran.
Hadda aan uga tagno qoraal hoose si aan si fiican u aragno kala duwanaanshaha higgaadinta:
Lambarada Jarmalka Xusuusin
Tirada hadda waa ilaa 100 ka 1 by tirada onarl Jarmal ilaa aan ka baran 100 Jarmal qori kartaa.
1den 100e Ilaa Jaantuska Jarmalka
DHAMMAAN WAXAY LAMA HELI KARO XEREMADA 1
1 Xubno 51 ein und fünfzig
digniin: Caadi ahaan, tirooyinka Jarmalku waxay ku qoran yihiin meel u dhow, marka nolol maalmeedka, tusaale ahaan 97 tirada sieben und neunzig qaab ahaan siebenundneunzig Si kastaba ha noqotee, waxaan si gooni ah ugu qornay halkan si si muuqata loo arko loona xafido si fudud.
Lambarada ilaa 1000 Jarmal
Aynu sii wadno lambarada Jarmalka ka dib 100.
Dhibcaha aan rabno in aan halkan ka muuqano waa shudder; Caadi ahaan tirooyinka nalalka ah ayaa loo qoraa, laakiin waxaan doorbidnaa inaan si gaar ah ugu qoro si aan si fudud u fahmi karno.
Haddaba aynu bilaabi ka 100:
In Jarmal 100 ah "hundert" demektir.xnumx-200-300 iwm Tirada "hundert" ka hor ereyga 400-2-3 iwm Number of erayada si ay u qoraan oluşur.hundert (Ciqaabtii), "e hundert" sida uu yahay.
Waxaad ku imaan kartaa labadaba.
200: Zwei hundert (Swayi hundert) (laba boqol)
300: Drei hundert (dray hundert) (saddex boqol)
400: Wareega (fi: Ir hundert) (afar boqol)
500: fünf hundert (fünf hundert) (shan boqol)
600: Sechs hundert (zeks hundert) (lix boqol)
700: Sieben hundert (zi: bin hundert) (toddoba boqol)
800: duufaan (cirfiid) (sideed boqol)
900: neun hundert (noyn hundert) (sagaal boqol)
Si kastaba ha noqotee, tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad qorto 115 ama 268 ama lambar kale oo wejiga ah oo sidan oo kale ah, ka dibna wejiga wajiga waa mid ka dib, oo waxaad ku qortaa.
104: dusha sare
110: jeex jehn (boqol iyo toban)
111: elf (waji iyo kow iyo toban)
112: hundert zwölf (boqol iyo laba iyo toban)
113: dreizehn (boqol iyo saddex iyo toban)
114: vierzehn hire (boqol iyo afar iyo toban)
120: hundert zwanzig (boqol iyo labaatan)
121: hundert und Ein zwanzig (boqol iyo labaatan)
122: hundert zwei und zwanzig (boqol iyo labaatan)
150: holland füfzig (boqol iyo konton)
201: Zwei hundert (laba boqol iyo hal)
210: Zwei hundert zehn (laba boqol iyo toban)
225: Zwei hundert fünf und zwanzig (laba boqol iyo shan iyo shan shan)
350: Drei hundert fünfzig (saddex boqol iyo konton)
598: Fünf hundert acht und neunzig (shan boqol iyo siddeed iyo sagaashan)
999: neun hundert neun und neunzig (sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad)
1000: Dhalinyaradu (khiyaano)
Markii la qorayo lambarro 3-god ah, taasi waa, tirooyin boqolaal leh, af Jarmal Marka hore qaybta wajiga ayaa qoran, markaa lambarka labada lambar wuxuu u qoran yahay sida aan kor ku aragno..
tus 120 Hadaan marka hore dhahno waa hundert waxaan dhihi doonaa, intaas ka dib zwanzig Markaa waxaan dhihi doonaa waa wax la yaab leh isagoo leh 120 waxaan dhihi doonaa.
tus 145 Hadaan marka hore dhahno waa hundert waxaan dhihi doonaa, markaa funfundvierzig Markaa waxaan dhihi doonaa ein hundert funfundvierzig isagoo leh 145 waxaan dhihi doonaa.
tus 250 Hadaan marka hore dhahno zwei hundert waxaan dhihi doonaa, markaa fünfzig Markaa waxaan dhihi doonaa zwei hundert funfzig Waxaan dhihi doonaa 250 anagoo dhahna.
tus 369 Hadaan marka hore dhahno drei hundert waxaan dhihi doonaa, markaa neunundsechzig Markaa waxaan dhihi doonaa drei hundert enunundsechzig Waxaan dhihi doonaa 369 anagoo dhahna.
Tiro isku mid ah waxaa loo sameeyey lambarrada.
3000: Drei darbi
5000: Fünf yareyn
7000: siiben khatarta
Sidoo kale eeg tusaalooyinka hoose.
11000 : naxariis leh
12000 : nabadgelyo
24000 : vier iyo zwanzig tausend
46000 : sechs iyo vierzig tausend
57000 : sieben iyo fünfzig tausend
78000 : aad iyo aad baad u mahadsantahay
Halkan waxaa jooga toban kun, iyo laba iyo tobanka kun iyo saddex iyo toban kun iyo afar iyo tobankii kun.
Sida aad arki karto intaad tibaaxayso lambarrada, lambarro laba-god ah iyo lambar kun ah ayaa ku lug leh. Halkan, sidoo kale, waxaan ku helnaa lambarkayaga oo aan marka hore keenno lambarkayaga laba-lambar ka dibna erayga kun.
13000: Dhiibehn xumaan
14000: Werwerka qaldan
15000: Fünfzehn darbi
17000: khatarta siibzehn
18000: Achtzehn khatarta
19000: Qalbigga neunzehn
20000: Zwanzig darbi
Haatan waxan la soconnaa tobanaan kun oo tusaalayaal ah:
21000: ein und zwanzig ujeeda (labaatan kun)
22000: Zwei und zwanzig darbeed (labaatan iyo labaatan kun)
23000: Drei und zwanzig xadend (labaatan iyo saddex kun)
30000: dreißig khabiir (soddon kun)
35000: Fünf und dreißig qalend (soddon iyo shan kun)
40000: Qalbig (vi)
50000: Fünfzig sisir (konton kun)
58000: Acht und fünfzig sisay (ellisekiz-bin)
60000: Qalabka sechzig (tuur tuur)
90000: neunzig khabiir (sagaal iyo sagaashan kun)
100000: Qalbi-celinta (boqolaal kun)
Tirada boqollaalka Jarmalka Jarmalka
Habka Jarmalka waa isku mid boqolaal kun.
110000: jilbaax jilicsan (boqol-kun)
120000: Xantii jilicsanayd (boqollaal iyo kumanaan)
200000: Zwei hundert khabiir (laba boqol iyo kun)
250000: Zwei hundert fünfzig khabiir (laba boqol iyo kun)
500000: Fünf hundert khabiir (shan boqol iyo kun)
900000: Qalbigga neun-geedka (sagaal boqol iyo kun)
250000 : si aad u hesho macluumaad faahfaahsan
600000 : si tartiib tartiib ah
Haddii aan nahay inaanu soo uruurinno waxa aan baranay illaa iyo hadda, waxaan ku dhihi karnaa wadaagid:
Marka laba lambar tiradoodu qoran yihiin, tirada ugu horreysa ee ku xigta tirada labaad ayaa la qoray.
In saddex lambar, tusaale ahaan, shan boqol (105) Tirada wejigooda ka hor tirada labaatan iyo shan hor keenay tirada wejiyada iyo ka dib, tusaale ahaan, saddex kun oo tirada by qaaada laba lambar (3000) tirada loo abuuray ka hor iyo ka dib markii saddex kun. Haddii ka dib markii saddex kun iyo saddex tiro ka hor qoraal oluşturulur.xnumx kun (saddex kun iyo afar boqol iyo konton iyo lix) ka hor inta tirada saddex kun, afar boqol iyo konton lix, ka dibna qoraal la aasaasay.
Lambarrada waaweyn ayaa si isku mid ah loo qoray, ka bilaabma tallaabo weyn marka hore.
Xaqiiqdii, tirooyinku aad ayey ugu fudud yihiin Jarmal. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ogaato lambarrada 1 illaa 19 iyo lambarrada 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1.000 iyo 1.000.000. Kuwa kale waxaa si fudud loogu muujiyay iskudarsanaanta tirooyinkan.
Maxaa ku saabsan tirada Jarmal haddii sameeyo jimicsi badan marka la eego labada waxbarashada iyo maanka ku hayo, labada Turkish iyo Jarmal wici kartaa lambarada si degdeg ah in la eego in uu noqon doono natiijooyin aad u wanaagsan.
Tirada Milyan Jarmal
Million Jarmal ee foomka of e 1 million, gelinaya tirada erayada aan ku gaari kartaa waxa aan dooneyno hore ee kala duwanaansho yazılır.millio aan rabno.
Waxaad arki doontaa sida ay u fududahay in la eego tusaalooyinka hoose.
eine Millions: 1.000.000 (Hal milyan)
Zwei Milloon: 2.000.000 (Labo milyan)
drei Milloon: 3.000.000 (Saddex milyan)
Vier Milloon: 4.000.000 (afar milyan)
1.200.000: Eine Millions oo Zwei u daadsan (hal malyan laba boqol oo kun)
1.250.000: eine Sanadkii Zwei wuxuu ku qulqulayaa fünfzig (hal milyan iyo laba boqol iyo konton kun)
3.500.000: Drei Million shimbir qiyaasta qiyaasta (3 Milyan shan boqol)
4.900.000: Xeebta Milyan Doolar (4 Milyan sagaal boqol oo kun)
15.500.000: fünfzehn Million fünf hundert khafiif ah (shan iyo toban milyan shan boqol oo kun)
Iyo lixdan kun iyo shan boqol iyo afar boqol iyo laba iyo soddon,
Haddii aad fahamto tusaalooyinka tusaalooyinka kor ku xusan, waxaad ku qori kartaa oo tiri kartaa dhammaan tirooyinka ilaa biilasha naftaada Jarmalka si fudud.
Layliyo leh Lambarro Jarmal ah
Ka soo horjeedda tirooyinka hoose JarmalQor:
Sidaa awgeed, waxaan ku soo bartay oo aan dhameynay qayb kasta oo ka mid ah arinta Jarmalka, asxaabtii qaaliga ah.
Nambarada Jarmalka : Jawaab su'aal
Waa maxay lambarada laga bilaabo 1 ilaa 20 ee Jarmalka?
# Nambarada Jarmalka Ilaa 10 ( Sawir leh)
# Lambarrada ka soo jeeda Jarmalka 1den ilaa 100e
# MUUQAALKA JARMALKA (IMAGE)
# Numbers Jarmal
# 1den 100e Ilaa Jaantuska Jarmalka
# Lambarada ilaa 1000 Jarmal
# Tirada boqollaalka Jarmalka Jarmalka
# Tirada Milyan Jarmal
# Layliyo leh Lambarro Jarmal ah
# Nambarada Jarmalka : Jawaab su'aal
Tags: 10. fasalka nasiibka mawduuca, 10. nambarada nambarka fasalka, Lambarada Jarmalka ilaa 100e, 9. fasalka nasiibka mawduuca, 9. nambarada nambarka fasalka, 9. nambarka nambarka nambarka maadada, nambarka nambarka, nambarada nambarka illaa 100e, Tirada nambarka nambarka, koorsada nambarka nambarka, jimicsiga lambarada nambarka, Kaararka nambarada, nambarka nambarka mawduuca, nambarka nambarka ilaa boqol, akhrinta nambarada nambarka, qorista nambarada, nambarada nambarka, ilaa tiro ahaan 100 jinsiyad